Chii chinonzi Hit? Uye kumwe kuongorora kweJaggon | Martech Zone
Chii chinonzi Hit? Uye mamwe maJaggon ekuongorora
Monday, May 14, 2007 Muvhuro, July 7, 2014 Douglas Karr
Vhiki rapfuura ndakatora zuva rekushanda ndikapinda Webcamp, musangano wedunhu weInternet Technology. Kunyangwe ini ndaive ndakazvimiririra mutauri (pane blogging), ndakadzidza zvakawanda nezvenzvimbo dzisiri yangu bailiwick. Kubudirira kwangu mukubloga kwave kuri kwakanyanya nekuda kwekuda uye kugona kukuru kwehunyanzvi. Kubloga kunoda kuti ndive jack wezvese mabasa asi ishe weimwe. Misangano yakaita seiyi inondibatsira kukwirisa hunyanzvi hwangu munzvimbo dzeutera!
Imwe yemisangano yandainakidzwa chaizvo yaive paWebhu Analytics. Ndakanga ndisati ndambozviona, asi izwi rekuti 'hits' rave kutofa pamusoro pemakore apfuura. Kana vanhu vandibvunza kuti mangani 'hit' andinowana, ini ndinopindura neangu 'akasarudzika kushanya' nhamba, kwete iyo chaiyo nhamba yekurova. Ini chaizvo handizive kuti mangani maheti andinowana. Izvi zvaivhiringidza kune vazhinji vevashandi vebhizimusi vakapinda musangano zvakare - vanga vachinzwa 'hits' kwemakore. Ini ndinofunga paunenge uchifambira mberi uchikwira manera kure neteki uye uchienda kuimba yebhodhi, 'hits' richiri izwi rakajairika. Izvo zvinoda kuchinja.
Chii chinonzi Hit?
A 'hit' inyatso isina basa (sekutsanangurwa zvine simba neWebhu Analytics pro, Julie Hunter, akataura). Hits inoreva chaizvo kuti mangani zvikumbiro zvakaitwa kubva kuseva yako. Mumazuva akanaka e ol, ichi chaive chiyero chakakura sezvo peji rewebhu raiwanzo kuve rakazvimiririra sangano. Pane imwe nguva, mifananidzo yaisara, kwete mutemo. Kukumbira peji rewebhu zvakanyatsoratidzwa peji rakazara rewebhu. Iyo haisiriyo nyaya futi.
Analytics Mapakeji ari Akaderera Hits
Pinda kune yako yaunofarira Analytics package (Ini ndinoda Google Analytics uye Clicky) uye haugone kuwana 'hits' chero kupi. Nekutenda, nyanzvi dzeAnalytics vari kupedzisira vatarisa mametric anonyanya kukosha. Clicky inotowedzera ako maficha manhamba kubva kune iyo Feedburner API kune zvaunoshuma!
Heano akakosha mashandiro ekuita kuti utarise yako Webhu Saiti:
Kuongorora peji - Peji rinotarisisa iwo huwandu hwakazara hwemapeji akazara mune ese kushanya uye mukati menguva yauri kuyera.
Mapeji paKushanya - Peji rinotarisa zvakakosha kana iwe uchitora kutarisa kwakachena kwekuti vangani vashanyi vako vanonamira. 7 vashanyi uye 7 peji ongororo? Izvi zvinoreva kuti mushanyi wega wega anoverenga peji rimwe chete. Sa blogger, angu Mapeji ekuona peji akaderera zvakanyanya kupfuura ini zvandaida, saka kuzvitarisa kwakakosha. Zvakanakisa zvemukati uye kubatanidza pakati pezvinyorwa zvinochengeta vashanyi zvakapoterera kana kuvakwezva kune zvimwe zvinyorwa. Uchaona akawanda maratidziro mukati mezvangu zvinyorwa pamwe nezvimwe zvakabatana zvakatumirwa mubato rangu repadivi… izvo zviripo kuyedza kuchengeta vanhu vakatenderedza. Kunyanya ivo vanonamira kwese, zvirinani zvandiri kuita!
Mutsva Wevashanyi Rate - Kunze kwemunhu wese anoshanyira webhusaiti yako, iyi nhamba yeaya asina kumbobvira ashanyira muhuwandu hweperesenti. Ini ndinoda kugara ndichitarisa nhamba iyi zvakare… sekureba sekugona kwangu kuchengetedza vashanyi vangu varipo nekusundira vatsva, zvinoreva kuti ndiri kuchengetedza vaverengi uye kukura.
Bounce Rate - Ava ndivo vanhu vanoshanyira yako saiti uye kubheja kunze. Izvi zvinowanzoreva kuti ivo vanga vasiri kuwana zvavaitsvaga. Ramba uine ziso pane izvi ... zvinogona kunge uri kutora zvisina kukodzera indexed yezvako zvemukati kana zvako zvemukati zvinonhuwa. Ita shuwa kuti iwe unosimudzira izvo zvauri uye woomerera pairi. Izvo zvinochengeta vanhu vakatenderedza.
Avhareji Nguva Pane Saiti - SeMapeji paKushanya, zvakanyanya kuwedzera, handiti? Kwandiri, chokwadi. Nekudaro, kune webhusaiti kwandinenge ndichitengesa chimwe chinhu, izvi zvinogona kureva kuti saiti yangu inorwadza muchigamba kufamba uye ini ndoda kuita rimwe basa. Kuita kuti vanhu vafambe vachitenderera saiti yako zvisina kugadzikana kunogona kuwedzera avhareji yako nguva pane saiti, asi havazombodzoka.
Kutendeuka - mukati meecommerce nyika, 'kutendeuka' kunowanzove kutenga. Zvinoreva kuti vakauya, vakawana, vakatenga! Kune blog senge yangu, zvinogona kureva kuti vadzvanya pachiziviso, vakaita chikumbiro chekuita zvekuita, kana kurodha pasi kabhuku. Ndeipi chinangwa cheblog yako kana webhusaiti? Uri kunyatso kuyera icho sekushandurwa? Unofanira kuva! Mukati meAnalytics mapakeji, shanduko dzinowanzo kuyerwa nehurongwa hwekuwedzera 'Zvinangwa' kune yako saiti mune yeAnalytics package ine imwe yakatarwa kodhi mumapeji ako ekusimbisa. (kureva. Kutenda nekuodha pasi!). Haisi nguva dzose chinhu chiri nyore kuita… Seth anobvumirana.
Uye zvechokwadi, kana iwe usati uchichiwana - iva nechokwadi chekumira Webcamp! Iyi posvo yakafemerwa nehurukuro huru yandaive nayo neshamwari yangu yakanaka, JD Walton paBlackinBusiness blog. Ndiri kuyedza kuve murairidzi akanaka kuna JD - asi iye ari kudzidza izvi zvinhu nekukurumidza kupfuura zvandinga zvikande kwaari! Ini ndanga ndine JD paGoogle Analytics kubvira blog yake payakatangwa, asi akagadzirira kutanga kuongorora akewo matanho kare!
Tags: analytics metricsanalytics mazwiavhareji nguva pane saitibounce ratekutendeukarovachiyero chitsva chevashanyimapeji pakushanyakuwongorora pejiVakasarudzika Vashanyivashanyi
Douglas Karr Monday, May 14, 2007 Monday, July 7, 2014
WordPress: MySQL Tsvaga uye Tsiva uchishandisa PHPMyAdmin
Mamaneja echigadzirwa anofunga sei…
May 15, 2007 pa 11: 57 AM
Doug, iwe uri pamusoro pe3000 pasirese, 2200 uye shanduka. Ndine rombo rakanaka kuva newe semurairidzi. Ndakawedzera misoro yangu kuitira kuti nharaunda yakasiyanasiyana ikwanise kubatsirwa nezviitiko zvebhizinesi rangu zvinosanganisira kuve Global VP yekutengesa nekutengesa. Simba rako uye njere uye hunyanzvi hwevanhu zvinongopfuura nekunzwisisa kwako kwemablog kubva kunongedzo uye zvine hungwaru nzvimbo yekutarisa. Iwe une iyo yekuziva kuti izvozvo zvinobatsira sei vanhu kukura traffic uye bhizinesi kukura mari uye purofiti. Iwe muganhu weunyanzvi
May 15, 2007 pa 3: 43 PM
Ini muganhu weunyanzvi, asi zvinosuwisa, ndagara ndichizviwana ndiri padivi remupendero! Ndatenda JD! Iwe unogara uzere nekurudziro uye mukuru chipangamazano!
May 25, 2007 pa 9: 55 AM
Iwe unozvininipisa zvakanyanya,
May 28, 2007 pa 9: 55 PM
Mhoroi Kutenda nechinyorwa chino pakubvisa zvimwe Whats? Ini ndiri mutsva kudivi iri reWebhu ini ndinowanzo kungotarisa asi ikozvino ndiri wannabe webmaster anomhanya maviri arcade masosi kuti ndizvipunze ndoga kuitira zvinhu zvikuru uye zvirinani. Icho chiitiko chekudzidza !!